Maxay Itoobiya ku Qoonsatay RW Cumar Cabdirashid?
Home /Blog/Maxay Itoobiya ku Qoonsatay RW Cumar Cabdirashid?
Warbixinta Itoobiya dhawaan qortay waxaa ka muuqda diidmo cad oo Itoobiya ku diidantahay in RW CCC uu noqdo madaxwayne Soomaaliyeed .
Waxaase iswaydiin leh maxay Itoobiya ku qoonsatay masuulkaas?
Sababo badan ayaa jiri kara , laakiin waxa macquula arrimaha soo socda :
1- Itoobiya oo dareen ka qabta dibloomaasiyadda iyo xiriirka dhaw ee uu la leeyahay dawladaha caalamka taas oo keeni karta inuu arrimaha Soomaaliya ka fogeeyo gacan ku haynta Adis-Ababa.
2- Intii uu xilka hayay ma ahayn siyaasi inta badan iska xaadiriya Adis-Ababa , waxana uu xiiriir dhaw la sameeyay dawlado Carab ah oo Itoobiya ka shakin karto sida Imaaraadka Carabta oo ku daaban Masar oo Itoobiya ay biyaha Nile ka isku hayaan.
3- CCC maaha siyaasi ay shaabadayn karto Itoobiya oo ay caalamka ka dhaadhicin karto inuu yahay wadaad ama islaami gacan saar la leh islaamiyiin mayal adag , taasina waxa ay Itoobiya ku waayi kartaa garawsiyo ay aduunka uga hesho faragelin joogto iyo galaangal ay Soomaaliya ku sii lahaato, waana hab ay ku baado siyaasiyiin badan oo Soomaali ah oo xilli uun ka mid noqday ururada Islaamiyiinta Soomaaliya.
4- CCC aabihiis oo soo noqday Ra’suul Wasaare iyo Madaxwayne waxa uu dagaal iyo baratan adag la galay Itoobiya , waxa uuna aaminsanaa fikradii Soomaali wayn , waxaana lagu xusuustaa hadalkiisii ” gacana codkaan ku dhiiban mid na Itoobiya ayaan isaga celin”. Waxa kale oo uu horseed u aha heshiis lala galo Midawgii Soviet ka iyo dhismihii ciidankii Soomaaliyeed .
Tana waxa ay gayaysiin kartaa Itoobiya cabsi ay ka qabto wiilkii madaxwaynahaa , waxaana shakigaa sii xoojin kara booqashadii uu sanadii 2016 CCC ku tegay dalka Ruushka , taas oo Itoobiyaanka soo xusuusin karta tallaabadii aabihiis iyo dib dhiska ciidan Soomaaliyeed.
Puntland oo sheegtay in ay qabatay Sargaal ka tirsan Shabaab